စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် Samsung က Galaxy Note7ကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစတင်မည် Gadget သတင်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Samsung သည်အသစ်၏ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမှုကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် Galaxy Note ကို7ကြောင့်ပေါက်ကွဲစေ၎င်း၏ဘက်ထရီနှင့်အတူပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပြီ၊ စမတ်ဖုန်းတွေဖျက်ဆီးခံရတာအပြင်ကြီးမားတဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ၎င်းသည်ပိုင်ရှင်နှင့်ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁,၃၈၀ တန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်.
ကံကောင်းတာက Samsung ဟာအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ထင်ရပြီးလွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကသတင်းမီဒီယာအားလုံးကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့တရားဝင်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင်စက်ပစ္စည်းအစားထိုးလုပ်ငန်းစတင်မည်ကိုအတည်ပြုသည်.
ဖုန်းကိုကြိုတင်မှာယူထားသူများသည်နည်းနည်းကြာကြာစောင့်ရတော့မည်ဖြစ်သည် ဆမ်ဆောင်းသည်ဆိပ်ကမ်းများတင်ပို့မည့်ရက်ကိုမသတ်မှတ်ပါ, ဘက်ထရီပြproblemနာနှင့်အတူလုံးဝဖြေရှင်းနိုင်သည်။
? ဂယ်လက်ဆီအမှတ် ၇ တွင်ပါသောကြေညာချက်အသစ်။
+ အချက်အလက် https://t.co/yN7XHApo8C
- ဆမ်ဆောင်းစပိန် (@SamsungEspana) စက်တင်ဘာလ 7, 2016
Galaxy Note7ကို ၀ ယ်ယူသူမည်သူမဆိုရောင်းချမည့်နေရာသို့သွားပြီး၎င်းတို့အားပြန်လည်အစားထိုးရန်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ခဲ့သည်။ သင်တရားဝင် Samsung စတိုးမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ပါကသင်သည် 900 100 807 သို့မဟုတ်လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ဖြင့်သာဖုန်းခေါ်ရမည် support.note@samsung.com
ယခုအချိန်တွင် Samsung သည်ဥမင်၏အဆုံး၌အလင်းကိုစတင်တွေ့မြင်နေရသည်။ Galaxy Note7ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည့်သုံးစွဲသူများသည်ပြavoidနာများကိုရှောင်ရှားရန်သူတို့၏ကိရိယာကိုမည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကြိုတင်မှာယူထားသူများသည်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သော်လည်းလာမည့်နေ့များ၌တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဈေးကွက်သစ်တွင်စျေးကွက်၌ပြန်လည်ဖြန့်ချိရန်တရားဝင်နေ့ရက်ကိုပေးလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy Note7မှာမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေတယ်လို့သင်ထင်သလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် Samsung သည် Galaxy Note7ကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစတင်မည်ဖြစ်သည်